Icjọ Ezumike - Oge Omenala & Oge Mobile | Martech Zone
Wednesday, October 30, 2013 Tọzdee, Ọktoba 31, 2013 Douglas Karr
Anyị maara na ọ bụghị na Nọvemba ma, mana ezumike ahụ na-abịa ngwa ngwa maka ndị ahịa. Iji nyere gị aka inweta ahịa ezumike gị na gia, Offerpop tinyere nke a Ezumike ụjọ infographic ya na niile ezumike ezumike na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ị ga-ezute oge a.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ahịa niile ga-eji mgbasa ozi mmekọrịta iji chọta echiche onyinye pụrụ iche na azụmahịa maka ezumike na-abịanụ. You mepeela atụmatụ ezumike? You tinyela mmekọrịta gị na mkpanaka gị na atụmatụ gị?
Tags: nwa ogeKrismasezumikeezumike ezumikeinfographicinye ekele